अर्जेन्टिना : छनौटको सनसनी - खेलकुद - साप्ताहिक
अर्जेन्टिना : छनौटको सनसनी
फुटबल पण्डितहरू भन्छन्, फुटबलको विश्वकप जित्नु जत्तिकै गाह्रो छ, यसमा छनौट हुनु । एक वर्षपछि सन् २०१८ को विश्वकप रूसमा हुँदैछ र यसको दक्षिण अमेरिकी छनौटले फेरि प्रमाणित गरेको छ, विश्वकपका लागि छनौट हुनु वास्तवकै कठिन छ । दक्षिण अमेरिका विश्व फुटबलमा आफ्नो बेग्लै शैली एवं क्षमताका कारण परिचित छ । यो महादेशलाई युरोपसँगै पूरै विश्व फुटबलको महाशक्ति मानिन्छ । दक्षिण अमेरिकी छनौटमा १० टिम मात्र सहभागी हुन्छन् र तीमध्ये ४ टिम विश्वकपका लागि छनौट हुन्छन् भने एक टिमले प्लेअफको अवसर प्राप्त गर्छ ।
यसपटकको दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौट उचारचढावपूर्ण प्रदर्शनका कारण पूर्णत: अर्जेन्टिनामा केन्द्रित रह्यो । अन्तिम दिनको छनौट खेलअघिसम्म निश्चित थिएन, लियोनल मेसी र अरू उत्तिकै उत्कृष्ट खेलाडीले भरिएको अर्जेन्टिना विश्वकपमा उपस्थित हुनेछ कि छैन ? अर्जेन्टिनी टिमका समर्थक मात्र होइन, विश्व फुटबलका सबै प्रशंसक डर मानिरहेका थिए, कतै मेसीको अनुपस्थितिका कारण आउने विश्वकप खल्लो हुने त होइन ?
इक्वेडेरविरुद्धको अन्तिम खेलअघि अर्जेन्टिना अंक तालिकाको छैटौं स्थानमा थियो र यो छनौटको सबै सम्भावनाबाट टाढिएको अवस्था थियो । अर्जेन्टिनाले छनौटको पहिलो खेल इक्वेडरविरुद्ध नै खेलेको थियो र त्यसमा पराजित भएको थियो । अर्जेन्टिनाले सुरुवाती दुई खेलमै हार बेहोरेको थियो । पूरा छनौट चरणमा अर्जेन्टिनाले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेन । त्यसैले अर्जेन्टिना छनौट चरणभरि दबाबमा खेल्न बाध्य भयो ।
यद्यपि मेसीले इक्वेडेरविरुद्धको अन्तिम खेलमा जादुयी प्रदर्शन गरे र टिमलाई जित दिलाए । मेसीले आफ्नो टिमका लागि ह्याट्रिक गरे र सिद्ध गरे, किन उनलाई विश्वकै सर्वाधिक उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्छ ? यो जितपछि अर्जेन्टिना अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुग्यो र विश्वकपका लागि स्वत: छनौट भयो । ब्राजिल दक्षिण अमेरिकाबाट यसअघि नै छनौट भैसकेको थियो । अन्तिम दिन अर्जेन्टिनासँगै उरुग्वे र कोलम्बिया पनि स्वत: छनौट हुने भाग्यमानी टिम सावित भए ।
उरुग्वे दोस्रो स्थानमा रह्यो भने कोलम्बिया चौथो स्थानमा । एक प्रकारले यी चार टिमको छनौट अपेक्षितजस्तै थियो । प्रतिस्पर्धा जत्तिकै सनसनीपूर्ण र अप्रत्याशित रहे पनि छनौट तिनै टिम भए, जसमाथि विश्वास थियो । पेरु पाँचौं स्थानमा रह्यो र उसले प्लेअफ खेल्ने अवसर पाएको छ । अब पेरुले न्युजिल्यान्डविरुद्ध दुई लेगको प्लेअफ खेल्नेछ । पेरुले अन्तिम दिनको खेलमा कोलम्बियालाई बराबरीमा रोकेपछि यो बहुमूल्य अवसर प्राप्त गरेको थियो ।
यसपटकको दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौटमा सबैभन्दा निराशा रह्यो, चिलीको खराब प्रदर्शन र छनौट हुन असफल तीतो सत्य । पछिल्ला केही वर्षयता चिली दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा राम्रो टिम थियो, त्यसैले उसले लगातार दुईपल्ट दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका जितेको थियो, तर दुई पटकको डिफेन्डिङ दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन विश्वकप छनौटको छैटौं स्थानमा पुग्यो र निराशाजनक रूपमा रूसको टिकट काट्न असफल भयो ।
अपेक्षित टिमले नै रूसको यात्रा तय गरे पनि सबैले मानेका छन्, यसपटकको दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौट जत्तिको तीव्र प्रतिस्पर्धा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । ब्राजिललाई छाडेर अरू टिमका सम्बन्धमा अन्तिम दिनसम्म पनि कुनै निर्णय भएको थिएन ।
सबै छनौट चरणका खेलपछि पनि ब्राजिललाई छाडेर अरू टिमबीचको दूरी निकै कम थियो । जस्तो, पेरु र चिली समान अंकमा रहे— २६, तर गोल अन्तरले पेरु अगाडि पुग्यो । कोलम्बियाको २७ अंक थियो भने अर्जेन्टिनाको २८ ।
कुन समूह कस्तो ?
विश्वकपमा नदेखिने ठूला देश र स्टार
अष्ट्रेलियाले उपाधि रक्षा गरेको आठौं विश्वकप २००३ जेष्ठ २३, २०७६
इतिहासकै उत्कृष्ट ५ खेल जेष्ठ २३, २०७६